ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက် | Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co. , Ltd.
Jiangsu Shuangyang ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတူရိယာကုမ္ပဏီလီမိတက် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၈၀၀၀ မီတာအကျယ်အဝန်းရှိသည်2 , 15000 မီတာကျော်တစ် ဦး ကြမ်းပြင်includingရိယာအပါအဝင်2။ ၎င်း၏တရားဝင်မြို့တော်သည်ယွမ်သန်း ၂၀ အထိရှိသည်။ အရိုးအထူးကု implants များ၏ R & D, ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ရောင်းအားနှင့်ဝန်ဆောင်မှုထံအပ်နှံအမျိုးသားရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ကျနော်တို့အများအပြားအမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါပြီ။
တိုက်တေနီယမ်နှင့်တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကြမ်းများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကိုလုပ်ဆောင်ပြီး၊ ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများဖြစ်သော Baoti နှင့် ZAPP ကဲ့သို့သောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာနာမည်ကြီးတံဆိပ်များကိုရွေးချယ်သည်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာစက်ကိရိယာများ၊ စက်ပစ္စည်းစင်တာ၊ လျှောအပေါက်၊ CNC ကြိတ်စက်နှင့် ultrasonic သန့်ရှင်းရေးစသည့်စက်ကိရိယာများနှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာစမ်းသပ်သူ၊ အီလက်ထရောနစ် torsion tester နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ပရိုဂျက်တာစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီဆန်းပြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် ISO9001: 2015 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ISO13485: 2016 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်လက်မှတ်နှင့် TUV ၏ CE အသိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့ပါပြီ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားဗျူရိုကစီစဉ်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများအတွက်ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့်ရှိသည့် Implantable Medical Devices for Enforcement Regulation (Pilot) အရစစ်ဆေးခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အထူးအရိုးအထူးကုဆရာ ၀ န်များ၊ ပါမောက္ခများနှင့်ဆရာ ၀ န်များမှထောက်ခံမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရိုးပြားများတပ်ဆင်ခြင်းစနစ်၊ တိုက်တေနီယမ်အရိုးပြားပြုပြင်ခြင်းစနစ်၊ တိုက်တေနီယမ်အရိုးစုဝက်အူနှင့် gasket၊ maxillofacial အတွင်းပိုင်း fixation system ကို, maxillofacial အတွင်းပိုင်း fixation system ကို, တိုက်တေနီယမ်စည်းနှောင်စနစ်, ခန္ဓာဗေဒတိုက်တေနီယမ်ကွက် system ကို, posterior thoracolumbar ဝက်အူ - လှံတံကိုစနစ်, laminoplasty fixation system ကိုနှင့်အခြေခံ tool ကိုစီးရီးစသည်တို့, ငါတို့သည်လည်းအမျိုးမျိုးသောတွေ့ဆုံရန်မှပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထောက်ပံ့ခွဲစိတ်တူရိယာအစုံရှိသည်။ လက်တွေ့လိုအပ်ချက်များ။ ဆေးကုသမှုခံယူသူများနှင့်လူနာများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲရလွယ်ကူသောထုတ်ကုန်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒီဇိုင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောစက်ယန္တရားများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များစွာသက်သာစေပါသည်။
တရုတ်အိပ်မက်နှင့် Shuangyang အိပ်မက် ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အားတာ ၀ န်ယူမှု၊ တာ ၀ န်ယူမှု၊ ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောနှင့်လူသားဆန်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ရန်နှင့်လူများ၏ ဦး တည်ချက်၊ သမာဓိရှိမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆေးပစ္စည်းကိရိယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ဦး ဆောင်သောအမျိုးသားအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါသည်။ Shuangyang မှာကျနော်တို့အမြဲတမ်း ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူတောက်ပသောအနာဂတ်ကိုဖန်တီးနိုင်ရန်မျှော်လင့်သောစွမ်းရည်များကိုကြိုဆိုပါ။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ အားကောင်းသောကျွန်ုပ်တို့သည်သမိုင်းတွင်အမြင့်ဆုံးနေရာတွင်ရပ်တည်နေပါသည်။ ထို့အပြင် Shuangyang ယဉ်ကျေးမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်လာပြီးဆန်းသစ်တီထွင်မှုများပြုလုပ်ရန်၊ ပြီးပြည့်စုံစွာရှာဖွေရန်နှင့်အမျိုးသားအမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အရှိန်အဟုန်ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။
၁၉၂၁ မှ ၁၉၄၉ အထိဉာဏ်အလင်းပွင့်ချိန်အတွင်းအနောက်တိုင်းဆေးပညာ၏အရိုးအထူးကုများသည်မြို့ငယ်အနည်းငယ်တွင်သာတရုတ်ပြည်တွင်နို့စို့အရွယ်ရှိသေးသည်။ ဤကာလအတောအတွင်းပထမဆုံးအရိုးအထူးကုအထူးကုအရိုးအထူးကုဆေးရုံနှင့်အရိုးအထူးကုအဖွဲ့အစည်းပေါ်ပေါက်လာသည်။ ၁၉၄၉ မှ ၁၉၆၆ အထိအရိုးအထူးကုများသည်တဖြည်းဖြည်းသီးခြားအထူးဆေးကျောင်းများဖြစ်လာသည်။ အရိုးအထူးကုအထူးကုကိုဆေးရုံများတွင်တဖြည်းဖြည်းထူထောင်ခဲ့သည်။ အရိုးသုတေသနဌာနကိုပေကျင်းနှင့်ရှန်ဟိုင်းတို့တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပါတီနှင့်အစိုးရသည်အရိုးအထူးကုဆရာဝန်များသင်တန်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထောက်ခံခဲ့သည်။ ၁၉၆၆ - ၁၉၈၀ သည်ခက်ခဲသောကာလဖြစ်သည်။ ဆယ်နှစ်မငြိမ်မသက်မှု၊ လက်တွေ့နှင့်ဆက်စပ်သောသုတေသနလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲသည်၊ အခြေခံသီအိုရီဆိုင်ရာသုတေသန၊ အတုအဆစ်အစားထိုးခြင်းနှင့်အခြားတိုးတက်မှု၏ရှုထောင့်များ။ အတုအဆစ်များကိုတုပ။ ကျောရိုးခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ကျောရိုးခွဲစိတ်ခြင်း၊ ပူးတွဲခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာအရိုးအထူးကုဆိုင်ရာအခြေခံနှင့်လက်တွေ့သုတေသနများလျင်မြန်စွာတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူ ၁၉၈၀ မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ၊ တရုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်း၏အရိုးခွဲဌာနခွဲကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ တရုတ်အရိုးအထူးကုဂျာနယ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအရိုးအထူးကုခွဲနှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှစ၍ လမ်းညွှန်ချက်များကိုသတ်မှတ်ပြီးစံသတ်မှတ်ထားသည်။ နည်းပညာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးရောဂါကုသမှုကိုလျင်မြန်စွာတိုးချဲ့ခဲ့ပြီး၊ ကုသမှုအယူအဆကိုလည်းတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသမိုင်းကိုစက်မှုဇုန်အတိုင်းအတာတိုးချဲ့ခြင်း၊ အထူးပြုခြင်း၊
အရိုးအထူးကုနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအသုံးချမှုများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကြီးမားပြီးကမ္ဘာ့ဇီဝစျေးကွက်၏ ၃၇.၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၃၆.၁% အသီးသီးရှိသည်။ ဒုတိယအချက်မှာဒဏ်ရာကုသမှုနှင့်ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်ကုသမှုတို့သည်အဓိကထုတ်ကုန်များဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဇီဝထည်ပစ္စည်းဈေးကွက်၏ ၉.၆% နှင့် ၈.၄% ရှိသည်။ အရိုးအထူးကုအရိုးအထူးကု implants ပစ္စည်းများတွင်ကျောရိုး၊ စိတ်ဒဏ်ရာ၊ အတုအဆစ်၊ အားကစားဆေးဝါးထုတ်ကုန်များ၊ အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုသခြင်း (ဦး ခေါင်းခွံပြုပြင်ရန်တိုက်တေနီယမ်ကွက်) ၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၂၀ အကြားစုစုပေါင်းပျမ်းမျှတိုးတက်မှုနှုန်းမှာ ၄.၁% ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းအရိုးအထူးကုစျေးကွက်သည်ကြီးထွားနှုန်းဖြင့်တိုးတက်လိမ့်မည် တစ်နှစ်လျှင် 3.2% ၏။ တရုတ်အရိုးအထူးကုဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများအဓိကထုတ်ကုန်သုံးမျိုး - အဆစ်များ၊ စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ကျောရိုး။
အရိုးအထူးကု Biomaterials နှင့် implantable ပစ္စည်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း:
1. တစ်ရှူးသွေးဆောင် biomaterials (ပေါင်းစပ် HA အပေါ်ယံပိုင်း, nano biomaterials);
2. တစ်ရှူးအင်ဂျင်နီယာ (စံပြငြမ်းပစ္စည်းများ, အမျိုးမျိုးသောပင်မဆဲလ်သွေးဆောင်ကွဲပြားခြားနားမှု, အရိုးထုတ်လုပ်မှုအချက်များ);
အရိုးတစ်သျှူးပွနျလညျထူထောငျ, အရိုးနုတစ်သျှူးသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး 3. အရိုးအထူးကုသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုး။
အရိုးကင်ဆာကုသမှု (၄) အရိုးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများတွင် nano biomaterials ကိုအသုံးပြုခြင်း။
၅။ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း (3D ပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာ၊ တိကျသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာ)၊
6. အရိုးအထူးကု၏ Biomechanics (bionic ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ကွန်ပျူတာခြင်း simulation);
၇။ အနည်းဆုံးထိုးဖောက်နိုင်သောနည်းပညာ၊ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာ။